Semalt Expert: Tandindomin-doza ho an'ny Digital Vital amin'ny 2017
Ny mpikirakira dizitaly matetika dia mahatsapa fanavaozana mivaingana sy fiovana eo amin'ny digitaltontolo iainana. Ny fihenan'ny fiovàna dia matetika tsy misy dikany ary indraindray mahery. Ny tantara momba ny raharaham-barotra dia mampiseho fa ny fananganana sy ny evolisiona no hany fombamba ho tafavoaka velona amin'ny tontolo iainana matetika.
Tamin'ny taona 2016, niova ny tambajotra nomerika mba hamerenana ny tontolo iainana amin'ny fivarotana - phone out temperature monitor. TheNy fiakaran'ny firoboroboan'ny fitondran'ny finday dia nahatratra ny haavony, izay hanimba ny fizotran'ny fifamoivoizana. Sites toy ny Pinterest sy Snapchatdia mitombo sy manintona ny mpampiasa. Ny fivoarana amin'izao fotoana izao dia naseho tamin'ny mety ho dikan'ireo mpanjifa nomerika.
Miaraka amin'ny traikefa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa madinika sy mahazatra,Nandalo fiovana samihafa izahay nandritra ny taona maro - fanantenana vaovao vaovao ary manatsara ny fahafahana vaovao, Manimba na mampifanaraka: amin'ny tranga misy anay, ityNy filazana fa marina. Amin'izany, amin'ny fotoana rehetra dia mifantoka amin'ny faravodilanitra isika mba hanandramana sy hijerena izay zavatra mitranga any aoriana.
Tany am-piandohan'ny fahatelo fahatelo amin'ny 2017, ny manam-pahaizana tompondaka eran-tany Semalt ,Nik Chaykovskiy, dia namintina lisitr'ireo fironana izay fototry ny marketing ara-nomerika mba hanampiana ireo mpizahatany hanatsara kokoa an'ireny fandrosoana vaovao ireny.
1. Ny finday dia mampahafantatra ny mpanjifa ankehitriny
Ny fampiasana finday dia mihamitombo amin'ny fanadihadiana nataon'ny Pew ResearchCentre izay milaza fa 77 isan-jaton'ny olom-pirenen'i Etazonia no manana smartphone. Ny antontan'isa amin'ity taona ity dia hampiseho fa ny smartphones no mpanjifa tena sarobidy indrindrampividy indrindra.
Ny smartphone dia afaka manamarina ny tsikombakomba amin'ny vokatra, manolotra vokatra ary manaofividianana amin'ny fanampian'ny navigateur. Ny tahan'ny fampidirana ireo fitaovana ireo amin'ny fiainantsika andavanandro dia mahatonga azy ireo ho isan'ny kolontsaintsika.
2. Voarakitra mivantana ny lahatsary mivantana
Tamin'ny taona 2015, Meerkat, fampiharana mivantana mivantana dia natomboka ary dia vaovao.Herintaona taty aoriana, ireo tranokala fampahalalam-baovao henjana dia nivadika tamin'ny Facebook, Twitter, Instagram, ary YouTube.
Ny mivantana mivantana dia manome marika sy mpivarotra ambaratonga iray mifanohitra amin'ny hafatoerana satria manatsara ny traikefan'ny mpanjifa izany. Raki-peo noforonina tsara ahafahan'ny marika mikolokolo ny mangarahara ary koa mamela azyfifanakalozan-kevitra izay tsy mbola nomena teo aloha.
3. Zava-dehibe ny fampitam-baovao
Ny fampahalalana lehibe dia manan-danja amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa. Amazon,Spotify, ary Netflix dia ohatra amin'ireo orinasa goavana izay manatsara kokoa amin'ny angona lehibe miaraka amin'ny tanjona ahafahan'ny mpampiasa manana mari-pahaizana ambonypersonalization. Ny fampitomboana ny angon-drakitra dia manome marika iray mba hahazoana fandrindrana tsara kokoa sy tanjona mitombo ny isan'ny mpampiasa.
4. Manana anjara betsaka kokoa amin'ny Marketing Automation
Ny ankamaroan'ny mpividy dia mihevitra ny automation ara-barotra ho toy ny fanakiananasinga mahomby. Ny automation dia ampiasaina amin'izao fotoana izao mba hanamafisana ireo lafiny amin'ny marketing amin'ny votoatiny.
5. Fitaovam-pifandraisana mangatsiatsiaka mampiroborobo ny Marketing
Ny famokarana votoaty dia namorona fototra ho an'ny votoaty ratsy sy tsara. The hugeNy habetsaky ny angon-drakitra efa misy dia nanery ireo mpanentana vaovao mba hifanaraka amin'ny fomba tsara kokoa hampiroboroboana ny mpihaino sy ny tetik'ady hanamboarana ny mpampiasajavatra maro samihafa.
Ny tetik'asa matanjaka indrindra, lehibe na kely dia voatery mivoatra sy manavaopaikady vaovao ahafahana maharitra. Ny fifantohana amin'ny fironana voalaza etsy ambony ary ny fampidirana azy ireo dia dingana goavana manokàna.